VIDEO: Donald Trump oo diiday inuu salaamo Angela Merkel. – Xeernews24
VIDEO: Donald Trump oo diiday inuu salaamo Angela Merkel.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si cad isaga diiday inuu salaamo oo gacan qaado haweeneyda hoggaamiyaha ka ah dalka Jarmalka Angela Merkel, isagoo iska indha tiray codsi ay wariyeyaasha ku dalbanayeen inay is gacan qaadaan.
Arintaan la yaabka ku noqotay caalamka ayaa Wariyeyaashii sawirada ka qaadayay ay dalbadeen in ay is gacan qaadaan, kadib shir jaraa’id ay wada qabteen, wuxuuna madaxa u luxury hadalka wariyeyaasha.
Angela Merkel ayaa gacanta u taagtay iyadoo labo jeer ku celisay “Waxay rabaan inaan is gacan qaadno” hase ahaatee Donald Trump wax jawaab ah kama bixin, laakiin wariyeyaashii ayaa ku celceliyay, markii ay arkeena inuusan gacan qaadeyn ayey u mahad celiyeen Angela Merkel.
Arrintaan ayaa si weyn ay ugu hadleen saxaafadda caalamka, waxayna arin fool xun iyo hab dhaqan aan wanaagsaneyn ay ku tilmaameen in madaxweyne dhigiisa qaabilaayo uu sidaasi u dhaqmo.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/03/angela-merkel-donald-trump.jpg 404 706 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-03-25 23:18:312017-03-25 23:18:31VIDEO: Donald Trump oo diiday inuu salaamo Angela Merkel.
Kulan Xasaasi ah usocda Jawaari iyo Kheyre daawo dhibta ay Djibouti iyo Xerta maamulka Hargeysa ku hayaan beesha ciise